Nitsidika an'i Scandinavia tamin'ny Novambra
Scandinavia tamin'ny Novambra
Inona no andrasana amin'ny fialana sasatra any Skandinavia?
Ny volana Novambra dia mbola fararano amin'ny kalandrie, fa any Skandinavia , dia ny fiandohan'ny vanin-taona ririnina, izay tonga aloha be ary maharitra ela. Any amin'ny firenena dimy any avaratr'i Eoropa, izay ankatoavin'ny ankamaroan'ny mponina any Skandinavia (Norvezy, Danemarka, Soeda, Finlandy ary Islandy), dia maivamaivana ny volana Novambra - indraindray dia somary mitranga izany - ary matetika ny faritra ambanivohitra no rakotra lanezy matevina. Saingy ambany dia ambany ny fifamoivoizana amin'ny fizahan-tany amin'ity volana ity, izay mety midika vola be amin'ny vidin'ny lozam-pifamoivoizana sy hotely ho an'ireo mpitsidika.
Ny volana Novambra tany Skandinavia
Tonga dia tonga any Scandinavia ny ririnina amin'ny Novambra. Any amin'ny faritra maro any amin'ny faritra, ianao dia hahatsapa rivotra sy ranonorana, izay mivadika ho lanezy rehefa mankany avaratra. Ny dian-tongotry ny hatsiaka dia mamoaka ranonorana, izay avy eo dia mangatsiaka, mazava tsara amin'ny rahona vitsivitsy.
Ny toetrandro any Scandinavia dia miovaova araka ny toerana. Ohatra, Copenhagen, Danemark, dia manana fahalemena miadana sy ara-tsaina noho ny toerana eo akaikin'ny Ranomasina Avaratra sy Baltika. Ny hafanana ambony any Kopenhagen ho an'ny Novambra dia eo amin'ny 40 F, ary ny rotsakorana dia mahatratra 2,5 metatra eo ho eo. Raha ampitahaina, Helsinki, Finlande, dia niaina ela kokoa sy milentika koloina miaraka amin'ny elanelana avo lenta amin'ny 30 sy ny rotsak'ireo 3 santimetatra. Ny tombony azo avy amin'ny fandehanana any Scandinavia rehefa mangatsiaka be dia mety ho ny fahitana ny Avaratra Lights (Aurora Borealis) ao anatin'ny rahona mazava.
Toro-bidy amin'ny Novambra
Mitandrema foana hatrany satria ny volana Novambra dia mangatsiaka be mandritra ny andro ary mangatsiaka amin'ny alina.
Ampiasao ireo akanjo matevina lava lava misy ravina mafana, nefa mafana na volon'ondry matevina eny ambony, mba hahafahanao manala mora foana ny vakim-pahavaratra mafana rehefa ao anaty trano ianao. Manaova akanjo lavalava tsara raha manomana ski na sledding ianao.
Mandritra ny volana ririnina, dia mihena ny toe-javatra any Skandinavia, saingy misy zava-mitranga isan-taona isan-taona mampiseho mozika, sarimihetsika ary sakafo ny olona maro, na inona na inona mangatsiaka.
Islandy Airwaves: Fetiben'ny mozika natao tao an-toerana manerana ny afovoan-tanànan'i Reykjavik no mampiseho tarika vaovao avy any Islandy sy firenena hafa dimy andro ny herinandro voalohan'ny Novambra. Misy karazana fonosana avy any Etazonia sy any amin'ny firenen-kafa izay ahitana ny fiaramanidina, hotely ary fidirana amin'ny fetibe.
Fetiben'ny sarimihetsika: Fetiben'ny horonantsary fanadihadiana any Copenhagen no mampiseho sarimihetsika 200 manerana izao tontolo izao. Ny Fetiben'ny Sarimihetsika Stockholm International, izay natao nandritra ny 12 andro tamin'ny tapaky ny volana Novambra, dia manolotra sarimihetsika 200 avy amin'ny firenena 60. Ny fisehoan-javatra nahaliana dia ahitana seminera sy fihaonana miaraka amin'ireo mpilalao sarimihetsika sy mpilalao sarimihetsika.
Rakfiskfestival: Ny latabatra nentim-paharazana Norveziana, rakfish, dia vita avy amin'ny trondro an-dranom-boaloboka sy voasesika; Noravan'ny Norwegiana isan-taona ny rakofana. Ny tanànan'i Fagerness, telo ora any avaratr'i Oslo, dia mankalaza fety isan-taona isan-taona izay mitarika an'arivony hankafy ny trondro masira, voasasa miaraka amin'ny labiera sy akquavit.
Ny Andron'ny Olomasina: Any Soeda, ny Andron'ny Olomasin'ny Andro Farany dia andro iray hisaintsainana ny andro voalohan'ny ririnina Scandinavian. Ny ankamaroan'ny mponina dia maka ny andro hizaha ny fandevenana ary mametraka fehiloha, labozia ary latina any am-pasana. Ny fianakaviana dia mivory mba hihinana sakafo lehibe sy handehanana any amin'ny fivoriam-piangonana.
Andron'i Martin: Amin'ny fankalazana ny mozikan'i St. Martin, ny 10 Novambra, fianakaviana fianakaviana Soedoà no mankalaza ny goose miaraka amin'ny fety lehibe any amin'ny trano fisakafoanana sy trano. Ny fanasana dia manomboka amin'ny lasopy mainty vita avy amin'ny rà, sotro, voankazo ary zava-manitra. Ny goos dia feno paoma sy tsaramaso, avy eo dia mamony tsikelikely ary manompo miaraka amin'ny voanio mena, pòm sy voamadom-boromailala, ary arahin'ny Charlotte appel à dessert.
Ahoana ny fomba handraisana ireo hotely tsara indrindra any Eorôpa
Mitarika an'i Etazonia i Eoropa
Miaraka amin'ny Vikings any Skandinavia
Nahoana no 2018 no taom-pananahana ho an'ny fialantsasatry ny fianakaviana any Eorôpa?
Ireo zavatra goavana tokony hijerena any Budva, Montenegro
Ny fitetezana an'i Scandinavia tamin'ny Septambra
Reniranon'i Sunday: Maine's Cozy Big Mountain Ski Area
Lalana tsara indrindra ho an'ny fividianana any Portland, Oregon
7 Swimming Pools tsara indrindra any Manhattan
Tantara Vasai Fort teo akaikin'i Mumbai: Photo Essay and Tour
Fanampiana tobakasy Oklahoma
Buffet of Buffets miaraka amin'ny Entertainment Caesars any Las Vegas
Ahoana ny fandehanana any Lima any Cusco any Peru
Torolalana ho an'ny Kitsilano Beach ao Vancouver, BC
Ny fototry ny lalàna amam-panao Peroviana
Sequoia National Park sy Kings Canyon